Date My Pet » Enina Fitsipika Mba Hanampy Anao Manage ny Pet Namanao
amin'ny Kayla Pierce
Enina Fitsipika Mba Hanampy Anao Manage ny Pet Namanao
Last nohavaozina: Mey. 27 2020 | 2 min namaky
Raha toa ny mampiaraka ny tompon'ny biby, ianao dia handeha ho any mampiaraka ny biby ny biby tompony. Na izany ny kamo Golden telo ambin'ny folo taona na ny mitabataba Retriever cockatiel, ny fanalahidin 'ny fony dia amin' ny alalan ny biby.
Toy ny hanaja ny vady vaovao sy ny faritry ny fifandraisana vaovao, ka tokony hanaja ny biby fiompy sy ny ny mpiara-miasa mametraka azy ireo.
Raha vao miditra an-ny fiarahany amin'ny olona iray izay manana ny biby, ho sasatra ny fandikana ireo fitsipika tsotra.
AZA miezaka miara-ray aman-dreny. Raha toa ka ny mpiara-miasa tsy an-tsaina fa ny Chihuahua barks amin'ny aloka, dia tsy tokony anao. Na dia izao tontolo izao ianao-pianarana ny biby mpanazatra, ny biby tsy anareo, ary tsy ho mandra-tsipiriany izany indrindra ary nieritreritra avy (enga anie) resaka.
AZA miezaka ny haka ny toerana. Ny olona iray ny fifandraisan'ny ny biby dia zavatra tsara tarehy. Izay koa mihantahanta indrindra, manokana ary nahazo mafy. Raha ny daty tahirin-ny Alatsinainy maraina ho ela miaraka ny pup, mangataka mba hiaraka azy amin'ny sasany kafe, tsy tamin'ny firesahana azy io tanteraka. Raha handany ny alina ao an-tranony noho ny voalohany ihany no nahita fa ny oversized saka matory eo am-pandriana, miasa manodidina ny saka. Fair dia ara-drariny ary tao amin'ny farafara fotoana ela alohan'ny.
DON "T maneso azy ireo. Saka niaraka vehivavy? Ny olon-tiany ve mampiseho sary ny gerbil ny olona rehetra mihaona? Ny mpiara-miasa ve ny Chihuahua akanjo isa-maraina, na dia ny ankizilahy? Tsy ny toerana hitsara. Mety ho, ianao manana fombafomba amin'ny biby izay toa hafahafa ho azy ireo, ka mitandrina ny hanihany ho faran'izay kely.
VE anjara ny biby fiompy. Biby tena tia ny olona ny toetra amam-panahy. Raha afaka mahazo an-biby fiompy tsara ny fahasoavana, Mety ho ny tompony dia nanaraka daholo ny ambiny. Mahita zavatra azonao atao avokoa ny biby namana.
VE ahitana ny PET. Ho an'ny maro tokan-tena, Tahaka ny ankizy madinika biby fiompy. Ary raha te-hahita raha miara-dia mamirapiratra ny hoavinareo, aoka ny biby fiompy mihaona hahitantsika izay mifandray. Raha tsy tia ny hafa amin'ny voalohany, ataovy ao ny mba hahazo azy ireo any. Tsy izany ihany no ho mora kokoa, dia ho fomba lehibe hitondra anareo roa akaiky kokoa eo amin'ny fifandraisanareo.
Dia manao fihetsika lehibe. Izany, mety tsy te-hanana ny biby tenifototra miaraka amin'ny daty rehetra, fa ny ezaka no zava-dehibe. Mpiara-miasa rehetra dia mila mahafantatra fa raha raiki-pitia aminy indray andro, ianao tia ny biby, koa. Hankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany, na mividy azy itondrany. Hitondra azy ireo any amin'ny zaridainam-panjakana irery. Zavatra kely foana ny manisa, fa raha ny amin'ny biby fiompy, indraindray ny zavatra lehibe na dia miasa tsara kokoa.
Tiavo ny alika : New Leash ny fiainana
Top 4 Soso-kevitra Tokony ho Fantatrao Momba ny Dating